Njani ukuziphatha izindlu imali-mboleko deduction kwi-Japan - irhafu, umthetho Real estate kwi-Japan
Kwimeko apho ukuba ukhe wakha lemveliso entsha indlu okanye ukuthengwa okwesibini isandla real estate kuba yokuhlala, kuxhomekeke imeko, ungafaka isicelo irhafu credit. Ukuze isicelo eli izindlu imali-mboleko deduction, kufuneka ifayile irhafu kubuyela yi-ngokwakho. （ Nkqu ukuba ufaka salaried lwabasebenzi basefama, ufuna ukuyenza. Ukuba ungenza isicelo eli deduction, uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu, oxygen ngamnye ngonyaka. Kwaye uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu nge sine ezingama-oxygen kuba iminyaka elishumi, oxygen × iminyaka elishumi ezine zeerandi oxygen. Nangona kunjalo, kwimeko kufuneka ukuthengwa yakho real estate ngaphandle ukubhatala lwamanzi irhafu isibhozo, isixa-mali ngasentla ufumana isibini ezingama-oxygen kwaye, oxygen. Kwimeko kufuneka ukuthengwa yakho real estate ukusuka real estate inkampani, ukuthenga ixabiso ukwenzela ukwakha iquka ukusetyenziswa kwamanzi irhafu ye isibhozo. Nangona kunjalo, kwimeko kufuneka ukuthengwa i-real estate ukusuka umntu, wena musa kufuneka ahlawule lwamanzi irhafu. Ngoko ke, basically kufuneka ukuthengwa i-real estate cheaper yi-isibhozo kunokuba kwimeko nomthengisi bafanele ukubonisa ngu-real estate inkampani. Ngoko ke, kule meko kufuneka ukuthengwa yakho yokuhlala ukusuka umntu, ukuba ungenza isicelo eli deduction, uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu, oxygen ngamnye ngonyaka. Kwaye uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu yi-million oxygen kuba iminyaka elishumi, oxygen × ishumi leminyaka emibini ezingama-oxygen. Xa usenza isicelo izindlu imali-mboleko deduction okokuqala, kufuneka ifayile irhafu kubuya. Kodwa emva koko, wena musa kufuneka yenze imisebenzi werhafu yi-filing ngokwakho. Assumed ukuba ukhe wakha okanye ukuthengwa yakho yokuhlala ngojanuwari, kwi oxygen yi-mboleko (hereinafter ekubhekiswe kuye njengoko»ityala omnye»). Kule meko uza ifayile irhafu kubuyela isicelo izindlu imali-mboleko deduction kwaye emva ngojanuwari ka. Ngoko ke, ngaba azidingi ifayile irhafu kubuyela kwi kwaye emva ngojanuwari ka. Emva yakho irhafu filing ngojanuwari ka, abanye namaphepha angama-aya kuthunyelwa kuwe ngeposi kwaye ungabona ukuba ungenise ezi akubantu ukuba umqeshi wakho. Kwaye umqeshi wakho uyakwazi ukuziphatha konyaka uhlenga-hlengiso yi-reflecting yakho izindlu imali-mboleko deduction kuba alithoba eminyaka. Ukuba ungenza isicelo izindlu imali-mboleko deduction, kuxhomekeke isixa-mali-mboleko eseleyo, inxalenye yomthetho werhafu yengeniso kwaye resident werhafu yi-reimbursed kuwe. Ukuze isicelo eli deduction isixa-mali yakho yonyaka ingeniso, kufuneka amashumi ezigidi okanye ngaphantsi. (Oku amathathu ezingama-oxygen akusebenzi coincide neqabane lakho earnings. Isixa-mali yakho ingeniso yakho umvuzo — eziliqela deduction, njenge dependents deduction, loluntu i-inshorensi premium deduction njalo-njalo). Ufuna ukusebenzisa indlu yakho yokuhlala zingaphelanga iinyanga ezintandathu emva yakho yokuthenga okanye ugqibo yokwakha. Kwaye kufuneka kuba wahlala apho de yakwaspargs. Ukuba ufuna ukufaka isicelo izindlu imali-mboleko deduction kuba umvuzo earned ezingama- (uyakwazi ifayile irhafu babuyele emva end ka-), kufuneka siphile kwi-real ilifa de end ka.»Ityala», ukuba kufuneka isetyenziswe kuba ezikhethekileyo deduction kuba abantu abo zithengiswe yabo yokuhlala, njalo njalo. ngo- kwi, uyakwazi na isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Kwaye ukuba ukhe ekhohlo i-real estate ngowama, uyakwazi na isicelo ekhaya-mboleko deduction kuba umvuzo earned ngowama. Nkqu ukuba awunalo ekhohlo i-real estate, ukuba usebenzisa i-real estate kakhulu njengoko yakho-ofisi okanye renting ngaphandle baze bafumane yerente imali, uyakwazi na isicelo izindlu imali-mboleko deduction ngexesha ngelo xesha. Azakusebenzisa eliqalela bank njalo-njalo, kufuneka ishumi ngonyaka okanye ngaphezulu njalo-njalo, kufuneka yanelisa eziliqela iimeko. Nkqu ukuba unayo borrowed imali evela umqeshi wakho, ungafaka isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Nangona kunjalo, kwimeko uboleka imali evela yakho umqeshi kunye ukuboleka bezinga ngaphantsi kwesinye, uyakwazi na isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Kwaye imali-mboleko, kufuneka enxulumene yakho yokuhlala, hayi ishishini. Ngoko ke, ukuba ufuna ziquka depreciation iindleko zakho real estate okanye azakusebenzisa umyinge kuba ukubalwa kwishishini lakho income tax kwaye ukuthengwa i-real estate phantsi igama lakho okanye inkampani yakho, unako na isicelo eli izindlu imali-mboleko deduction. Nkqu ukuba ufuna ukusebenza ishishini lakho ngendlela yakho yokuhlala, njengokuba kude kube ngoku njengoko indawo yakho yoshishino incinane kune amashumi amahlanu iyonke igumbi indawo, ungafaka isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Ngokubanzi ukuthetha, nangona lo mgaqo-nkqubo sele siguqulwe amaxesha aliqela, enye imali-mboleko eseleyo ngu reimbursed kuwe kuba iminyaka elishumi (kwimeko ngaba wakha okanye ukuthengwa yakho yokuhlala kwaye emva konyaka ka-). Assumed ukuba ukhe wakha okanye ukuthengwa yakho yokuhlala ngojanuwari, kwi oxygen yi-mboleko (meko enye). Isixa-mali-mboleko eseleyo ekupheleni- ngu anamashumi oxygen (Kufuneka repaid omnye oxygen ngo-). Kufuneka ihlawulwe income tax kwaye resident werhafu ka-ezintlanu oxygen ngo. (Yakho umqeshi withheld ezintlanu oxygen ukusuka yakho umvuzo). Kulo mzekelo, ukuba ngaba isicelo izindlu imali-mboleko deduction (kwisithuba seminyaka emihlanu ukususela yakho yokuthenga okanye isakhiwo. Kodwa kufuneka ifayile irhafu kubuyela yi-mid ye Kweyokwindla zilandelayo kunyaka.), omnye ngu-oxygen reimbursed ukusuka wakho werhafu yengeniso. (anamashumi oxygen × omnye komnye oxygen). Kwesinye isandla, ukuba unayo borrowed oxygen ukusuka bank kwaye ukuthenga ixabiso lee-real estate ngu oxygen, ungafaka isicelo izindlu imali-mboleko deduction kuba kuphela oku oxygen. Ngoba, irhafu-ofisi presumes oku amabini oxygen (oxygen — oxygen) ayikho ukuboleka ukuthenga yakho yokuhlala. (Xa ufuna ukuthenga real estate, uza kuhlawula realtor imali njl. njl. Nangona kunjalo, ezi imirhumo asingawo ibandakanywe yokuthenga kwexabiso) ngale ndlela, Isijapanese urhulumente lijolise ekuxhaseni abantu ukwakha okanye ukuthenga yabo yokuhlala. Kwimeko abantu ifayile irhafu kubuyela, baya kufuneka yenze ngexesha mid kafebruwari kwaye Phakathi Kweyokwindla. Nangona kunjalo, kwimeko irhafu filing abo unako ukufumana reimburse uyakwazi ukuziphatha irhafu filing ukususela ngojanuwari. Ngoko ke, kwimeko irhafu filing kuba izindlu imali-mboleko deduction, ungayenza kwaye emva ngojanuwari ka- (kwimeko»meko»). Uyakwazi ifayile irhafu kubuyela kunye irhafu-ofisi ukuba sele kolawulo lwesixeko phezu yakho yokuhlala. Ngoko ke, ukuba ufaka abahlala Kachidoki, Chuo-ku, Tokyo kwaye besebenza Roppongi, Minato-ku, Tokyo, kufuneka ifayile irhafu baguqukele irhafu-office kwi-Chuo-ku (Ukuba abe precise, Kyobashi zeimusho). Uyakwazi ifayile irhafu kubuyela yi-ukwenza isicelo kwi-akubantu kunye namanye amaxwebhu ayimfuneko okanye ngeposi. Okanye kuxhomekeke kwizicwangciso zakho yokulungiselela, uyakwazi ifayile ngayo usebenzisa i-intanethi. Kuyimfuneko amaxwebhu kwifayili irhafu kubuyela ka-izindlu imali-mboleko deduction. esinye Isicelo ifomu irhafu filing (kwimeko ufuna salaried umsebenzi, kufuneka usebenzise uhlobo). u-Ingxelo ye-ukubalwa izindlu imali-mboleko deduction. Ngale ndlela, kufuneka yenze imisebenzi complex balo. zintathu Yakho isiqinisekiso yokuhlala Juminhyo. Idilesi kwi esi siqinisekiso kufanele coincide kunye idilesi real estate. ezine Eziqinisekisiweyo ukhuphelo real estate registry. Kule iphepha, igosa ka-tax-ofisi ingaba uyazi ubudala yokwakha, igumbi kwindawo (ebhalisiweyo igumbi kwindawo kufuneka amahlanu isikwere meters okanye ngaphezulu) yakho yokuhlala, njalo njalo. Kwaye ukuba ukhe ukuthengwa hotel okanye i-ofisi aze aphile apho, uyakwazi na isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Kwimeko wena iqabane lakho kuba ukuthengwa yokuhlala jointly, ebhalisiweyo floor ndawo ayikho umahlule ngo wena iqabane lakho. Ngoko ke, xa iqabane lakho kuba yokuthenga indawo yokuhlala amahlanu ㎡, njengokuba kude kube ngoku njengokuba ezinye iimfuno ingaba uvuma, xa iqabane lakho angafaka isicelo kuba izindlu imali-mboleko deduction. zintlanu Scanned ukhuphelo Ukuthengwa isivumelwano ka-real estate. Kule iphepha, igosa ingaba uyazi kufuneka uthenge i-real estate. Kwimeko kufuneka uthenge i-real estate ukusuka yakho relatives njalo-njalo, uyakwazi na isicelo eli izindlu imali-mboleko deduction. ezintandathu Withholding irhafu ukutyibilika gensen choshu hyo.
Nkqu ukuba umqeshi wakho sele ihlole konyaka uhlenga-hlengiso, ngenxa izindlu imali-mboleko deduction ayikho olubuyiselweyo kule iphepha. Ngoko ke, kufuneka ifayile irhafu kubuyela yi-ngokwakho. ezisixhenxe Iphepha ukuba certifies eseleyo ka imali-mboleko ngexesha konyaka. Yakho yebhanki njalo-njalo ndiya kuthumela yona. Ukuba unayo ukuthengwa real estate ngodisemba, oku iphepha iya kuthunyelwa kuwe emva januwari. Ngoko ke, usenongakwazi kwifayili irhafu kubuyela ezingama-januwari. Nakuba kunjalo, uyakwazi ifayile oku irhafu kubuyela kuba omnye emihlanu. (Nangona kunjalo,»kunjalo», ukuba wena musa ifayile irhafu kubuyela yi-mid Kweyokwindla ka, isixa-mali reimburse uza nciphisa.). Ngoko ke, uyakwazi phepha crowded lokulima. isibhozo Iphepha ukuba certifies umthamo yakho yokuhlala ngokuchasene earthquake okanye umgangatho wakho real estate. Kwimeko age yakho yokuhlala ngu ngaphezu amabini eminyaka (kwimeko wooden indlu) okanye amashumi amabini anesihlanu (kwimeko concreted building) okanye ngaphezulu, basically uyakwazi na isicelo izindlu imali-mboleko deduction. Nangona kunjalo ukuba kufuneka ezi iziqinisekiso, ungafaka isicelo kuyo. (Ngelishwa, uninzi iimeko, yakho yokuhlala akanalo oku iphepha. Ngoko ke, basically age yakho real estate, kufuneka ngaphakathi amabini unyaka okanye amashumi amabini anesihlanu. Kwimeko wena iqabane lakho borrowed imali jointly.
Xa iqabane lakho ingaba kuthi
Hayi guarantor), xa iqabane lakho kufuneka ngokulandelelanayo ifayile irhafu kubuya. Ukuba iqabane lakho ingaba na umvuzo, iqabane lakho ayikwazi kufumana reimburse. Ngoba, iqabane lakho alifumanisanga ihlawulwe werhafu yengeniso. Xa ukhethe izinto ezenziwe sesi sibini kubuyela kuba izindlu imali-mboleko deduction, inxalenye yengeniso irhafu imali nguwe ngu wabuyela nxowa yakho. Kuya thatha enye inyanga emva irhafu filing